नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अनि सरकारले नै भनोस्— भाँडमा जाए लोकतन्त्र !
अनि सरकारले नै भनोस्— भाँडमा जाए लोकतन्त्र !
- अमित ढकाल
यो लेख लेख्दै गर्दा निर्णय भएको लगभग ५५ घन्टा भयो। के महरामाथि छानबिन सुरू भयो? के महराले सांसद पदबाट राजीनामा दिए? छैन।